Conversocial: Dozie Ọrụ Ndị Ahịa Gị na Social Media | Martech Zone
Friday, May 10, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebuputa atụmatụ ha na-elekọta mmadụ site na ngalaba ahịa ha na-enweghị atụmatụ ọ bụla maka nsogbu ndị ahịa. Ndị ahịa anaghị eche na ị nọ na mgbasa ozi mmekọrịta maka ịre ahịa… naanị ihe ha chọrọ bụ ka elekọta ọrụ ndị ahịa ha. Ihe na-eju anya bụ na mmeghachi omume nke ndị ahịa na-adịghị mma ga-ebibi mgbalị mgbasa ozi mgbasa ozi kpamkpam.
Mgbanwe bụ ebumnuche wuru maka ndị ahịa na-elekọta mmadụ, na-enye arụmọrụ na-enweghị ntụpọ na atụmatụ siri ike ma lekwasịrị anya.
Atụmatụ nke Conversocial
Iche Iche nke ọgụgụ isi - Conversocial prioritization engine na-eji eke asụsụ nhazi na analysis nke akụkọ ihe mere eme Ibọrọ iji hụ na ị nwere ike obibi ihe dị mkpa ka gị ahịa, mbụ.
Channels Ọrụ Channels - Gakwuru ndị ahịa ọ bụla na-emepe emepe. Conversocial na - ejikọ gị na firehose Twitter, na - enye data ezubere iche nke ejikọtara kpamkpam na enweghị ọrụ, nke eburu ụzọ rụọ ọrụ.
Mmiri arụ ọrụ - Mkparịta ụka na-enye usoro maka ijikwa mgbasa ozi mmekọrịta, yana igbe mbata maka ozi dị mkpa. Nhazi ngwa ngwa na ozi dị mfe pụtara na ebe ọhụụ ọ bụla hụrụ, enweghị oge n'iyi.
Akụkọ mkparịta ụka - Nọgidenụ na mkparịta ụka na-agba ọsọ were were na zuru mmekọrịta akụkọ ihe mere eme nke ọ bụla nke gị Fans na-eso ụzọ. N’agbanyeghi onye choro okwu, onodu zuru ezu n’ebe ahu.
Ntugharị na-arụkọ ọrụ ọnụ - Arụ ọrụ ịrụkọ ọrụ na-enye gị ohere ịkekọrịta ozi ngwa ngwa, ma mepụta ọrụ maka ndị ọzọ. Tinye onye ahia gi ka ya na onye kwesiri ya na ozi di nma zitere gi.
ekele onye di elu maka biputere banyere Curalate na post ha, Ngwa Ndabere Ngwa-Azụ-Azụmaahịa Onye Ọ bụla Na-achọ Ugbu A.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaFacebookelekọta mmadụ mediaSocial Media MarketingTwitter